चितवनमा बज्यो खतरा’को घ’ण्टी : धुसरी पुल भाँचियो, सडक र बस्तीहरु डुबा’नमा ! – Sandesh Press
July 1, 2021 413
निरन्तरको वर्षाका कारण चितवनका विभिन्न स्थानमा बाढी आएको छ । पूर्वी चितवनको पंफाखोलामा आएको बाढीका कारण राप्तीका १५० घरधुरी विस्थापित भएका छन् ।
राप्ती नगरपालिका वडा नं ७ र ८ का भवानीपुर, सुन्दरबस्ती र खुरखुरेलगायत क्षेत्रका बस्तीमा खोला पसेको चितवन प्रहरीले जनाएको छ । यस्तै बर्षाले धुसरी पुल पनि भाँचिएको छ।
लदरी खोलामा आएको बाढीले चितवनको रत्ननगर र खैरहनी जोड्ने पक्की पुल भाँचिएको हो । पुल भाँचिएपछि सवारी आवागमन ठप्प भएको प्रहरीले जनाएको छ । यस्तै बूढी राप्तीमा आएको बाढीले डुबान गर्दा २० परिवार विस्थापित भएका छन् ।
रत्ननगर नगरपालिका–८ रमाइलोडाँडामा पनि बाढी पसेपछि २० परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ । यस्तै खैरहनी-८ पर्सामा रहेका डेजी स्कुलमा पनि बाढी पसेको छ ।
त्यस्तै निरन्तरको बर्षाले मेलम्ची खोलाको बहाव बढेको छ । केही दिन अघिमात्र बितण्डा मच्चाएको मेलम्ची खोलाले फेरि पनि स्थानीयलाई त्रसित बनाएको छ । १६ गते दिउँसोदेखि निरन्तर परेको पानीले हेलम्बुदेखि मेलम्चीसम्मको बस्ती जोखिम बनाएको भन्दै सतर्क रहन प्रहरीले आग्रह गरेको छ ।
मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार तटिय क्षेत्रहरुमा अझै बाढी आउन सक्ने भएकाले सुरक्षित स्थानमा गएर बस्न आग्रह गरेको छ । असार १ गते र ५ गतेको बाढीले जोगाएको खोला किनारका घर तथा संरचना र खेतीयोग्य जमिनहरुसमेत अहिलेको बर्षाले कटान गरिरहेको मेलम्ची वडा नं ११ का स्थानीय वासी दशरथ दनुवारले जानकारी दिनुभयो ।
खोलाको मात्रा बढिरहेको छ । अस्ति बचेको घर पनि लैजाने भो ज्यान जोगाउन मुस्किल छ दनुवारले भन्नुभयो । रासस
Prevआज बढ्यो सुनको भाउ ? हेर्नुहोस् कतिमा हुँदैछ कारोबार
Nextरातिदेखि नै निरन्तर वर्षाका कारण काठमाडौंमा पनि देखियो यस्तो बि’जोग !